प्रियंका चोपडाले झण्डै १ दर्जन बच्चा जन्माउने ! – Dcnepal
प्रियंका चोपडाले झण्डै १ दर्जन बच्चा जन्माउने !
प्रकाशित : २०७७ पुष २८ गते १४:१६
काठमाडौं। अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफूले झण्डै १ दर्जन बच्चा जन्माउन चाहेको बताएर सबैलाई चकित पारिदिएकी छिन् । २०१८ मा अमेरिकी पप गायक निक जोनससँग विवाह गरेकी प्रियंकाले बेलायती म्यागजिन सन्डे टाइम्ससँग कुरा गर्दै आफूले पूरै क्रिकेट टिमजति बच्चा चाहेको बताएकी हुन् । एउटा क्रिकेट टिममा १ दर्जनभन्दा मात्रै १ कम अर्थात ११ जना खेलाडी हुन्छन् ।